काउकुती लाग्दा मानिसहरू किन हाँस्छन्? – Etajakhabar
तर किन काउकुती लाग्छ र लागेपछि किन हाँसउठ्छ कहिल्यै विचार गर्नुभएको छ ? वैज्ञानिकहरू भन्छन्, आक्रमणकारी वा पीडकबाट तनावपूर्ण अवस्थामा जोगिन वा चोट लाग्नबाट बच्नको लागि आफू झुकेको भन्ने संकेत पठाउन मानिसको विकासक्रमको एक भागका रुपमा काउकुती लाग्ने गरेको हुनुपर्छ।
काउकुती लाग्दा मानिसको दिमागको त्यही भाग सक्रिय हुन्छ जसले व्यक्तिलाई पीडाको पनि सूचना दिने गर्छ । त्यसैले काउकुती लगाउँदा मस्तिष्कले शरीरलाई पहिल्यै सतर्क गरिदिन्छ । कुनै व्यक्ति एकदमै रिसाएको बेलामा उसलाई काउकुती कम लाग्छ र लागेपनि हाँसो उठ्दैन ।
काउकुतीका सम्बन्धमा हेर्नुहोस् यो भिडिओ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ १२, २०७६ समय: १०:२८:५१